"Mercedes" Spinner "" - lena imoto ukuthi waziwa emhlabeni wonke njengoba 'wokuhamba emihlanu ". wezwa igama kuphela yedwa, ungakwazi ukuqonda ukuthi lokhu umshini. W124 Mercedes e500 - umshini ukuthi nineties kwaba inkomba yokuthi umcebo kokuzitika. imiyalo Le moto behlonishwa futhi baziswa. Wayengase imali yohambo abantu elihle kuphela.
Futhi, mangisho, naphezu kweqiniso lokuthi kuye kwaba iminyaka engaphezu kwamashumi amabili, lo "Mercedes" namanje iphupho kubantu abaningi. Futhi-ke, usenguye kule simo of the nqampuna umhlabeleli nezimoto okuthembekile.
Ngakho, "Mercedes" Spinner "" - lena imoto enamandla kakhulu. Uma thina, abantu abaphila ekhulwini lama-21, lo mshini ibonakala enamandla, ungase ucabange ukuthi umbono ke senziwe nineties, lapho lobuchwepheshe intuthuko kungazange kufinyelele ezingeni eliphezulu enjalo.
"Mercedes 124" Spinner "" - lena looker kweqiniso. Akubuzwa, iqembu Stuttgart ukwaze ukukhiqiza izimoto ezikhangayo njalo, uhlobo okuyinto Kwakumangalisa. Four-umnyango Sedan ka cishe ezinhlanu amamitha - lokhu imoto nje akakwazi ukuba amehlo! "Mercedes" Spinner "" Kubukeka ocebile, eqolo, enkulu. Kodwa akukho babutha olulodwa. isitayela Classic - emasikweni inkampani edumile emhlabeni wonke-German. By the way, umklamo, ngaphezu kokuba ezikhangayo, ergonomic kakhulu. Wendlovu ivolumu 520 amalitha (futhi lena ubuncane!). Yiqiniso, ukuze usize e ukuthuthwa kwezimpahla endaweni entsha yokuhlala, lo mshini asifanele, kodwa abaningana amapotimende amakhulu ohambweni olude ukuze ngokwabo, kanye kalula.
Ngakho, leli sondo "Mercedes" Spinner "" kumila imoto 2800 mm. Ground imvume esihle - 160 mm! On the front oluvala amasondo, ungakwazi basho lokhu okulandelayo: ifakwe wishbone elingunxantathu, damper struts, zintengantenga ibha lekhoyili entwasahlobo. Ezingemuva is a multi-link, ikhoyili entwasahlobo, futhi isimame efanayo.
Front ukubopha disc ngesikhathi imoto Yiqiniso, umoya. Nse langemuva. usayizi iThire (ie amadiski ..) - 225/55 R16. Ngenxa lezi izici imoto muhle kakhulu endleleni, okubonisa handling kakhulu futhi ride bushelelezi kunoma yimuphi umgwaqo.
Ekhuluma imoto enjalo, njengoba "Mercedes" Spinner "," akunakwenzeka ukuba wazi ukunakwa namandla iyunithi, okuyinto libhonga ngaphansi hood walo mshini edume. Ngakho, ochwepheshe "umvuzo" indlela yakhe V emise 320-amahhashi injini, okulingana 4973 cubic ngamasentimitha. Motor itholakala longitudinally phambi. Zonke amasilinda eziyisishiyagalombili, ngamunye wabo valve amane. Ngaphambi "bangamakhulu" kulo mshini uyakwazi ukuba bahlakazeka ngoba 6,1 imizuzwana. Umkhawulo ifinyelela "Mercedes 124" Spinner "" kuyinto 250 km / h. Akuwona wonke izimoto zanamuhla Ingasheshisa kulelo isivinini. Akumangalisi 124-th "Mercedes", eyaziwa ngokuthi i- "wokuhamba emihlanu", namanje kubhekwa omunye the best.
Powered powerplant umshini egijima ngokuthi "Mechanics" futhi "okuzenzakalelayo". ERussia, eziningi udumo yazuza izimoto ne yokudlulisela mathupha.
Ngakho, nophethiloli ithangi wemoto "Mercedes e 500" Spinner "" elilingana ivolumu 90 amalitha. Ukusetshenziswa uphethiloli kuyinto umjikelezo ezisemadolobheni 16.9 amalitha ngamunye amakhilomitha angu-100. Kodwa akubona bonke abantu acabangele yokuthi isibalo fuel aphumayo futhi kuncike fast kanjani imoto ihamba. Lokho kusho okuningi. Ngesivinini 90 km / h, isibonelo, izinga ukugeleza incipha, futhi eziningi. Kwakucishe 17 amalitha, waba - 10.3. Savings amalitha angaphezu kwayisithupha! Futhi lokhu kubaluleke. Abantu eyaziyo lokhu ehilelekile, ukulondoloza amanani abalulekile uphethiloli. Ngezinye 120 km / h ngemoto ludinga ukukhwezelwa ngaphezulu - 11.9 amalitha ngamunye "Abangamakhulu". Futhi ekugcineni, kukhona omunye umjikelezo, ababiziweyo European. It "Mercedes" Kuthatha cishe 13 amalitha per km 100.
Kunconywa ukugcwalisa imoto uphethiloli AI-95. Lokhu kuyaqondakala, ngoba kubhekwa eliphezulu kakhulu futhi kuyabiza. Nokho, "Mercedes" isono "feed" ezinye nophethiloli.
Kukhona esinye isihloko ezithakazelisayo futhi ezibalulekile ngokuphathelene imoto "Mercedes" Spinner "." Inani - yilokho nje udinga ukukhuluma. Esikhathini 90 imoto kwakubiza kakhulu. Okusha, okusheshayo, sibukeka kahle enamandla - I-"ezinhlanu wokuhamba" amakhulu ezinkulungwane zabantu ziye posted on 150,000 doychemarok. Kumayelana 75 000-euro. Kuze kube manje, unikezwa nokukala imali kwamanje, leli nani okulingana cishe 5.5 sesigidi sama-ruble! Ngempela, imali eningi. Ngoba "Mercedes" iqembu manje ukuthengisa izimoto zabo ezintsha zemidlalo eziphambili zesimanjemanje. Cishe efanayo izindleko SL400 3.0 AT. Kuyathakazelisa, kodwa injini yaleli Supercar akuyona enamandla kakhulu kunalezo iyunithi "ezinhlanu wokuhamba" - 13 "amahhashi" kuphela.
Nokho, kufanele ubuyele emuva nesihloko esikhulu. Manje, ngo-2015, akekho uzokubuza isizumbulu E500. Esimeni esihle, cishe "umnakekeli" isimo "wokuhamba emihlanu" nge ezincane (imoto oneminyaka engu-20 ubudala) mileage mayelana 100 000km izobiza ruble mayelana 1.3 million. Lokhu kungaphansi kane kunokuba intengo kokuqala. Kumelwe ngivume ukuthi kulo mshini akuyona into edabukisayo ukukhokha isamba okunjalo.
Ekhuluma imoto enjalo, njengoba "Mercedes" Spinner "," test drive iluphi okuzoxoxwa ngalo kamuva, asikwazi dengwane elingaphakathi yayo. Interior - kuyinto ebaluleke kakhulu ingxenye. Phela, ngaphakathi emotweni umnikazi imoto uchitha isikhathi esiningi. Nokho, singasho ngokuphepha - umshini ezinjalo, njengoba "Mercedes", Tuning elingaphakathi ngokuphelele akudingekile. Abakhiqizi konke ngesandla.
I umhlobiso ingaphakathi sibukeka sisihle. Akukho engadingekile - zonke izinto kukhona eliphezulu ngomusa ukugcizelela ingaphakathi. lesikhumba Excellent, plastic okuhlala, lihle quality Yakha, Ergonomics kahle ihlolwe - konke okudingayo, futhi akukho okunye ezingase zisikhiphe umshayeli. Futhi ngaphakathi lo "Mercedes" ujabula kakhulu ukuba hhayi kuphela ngenxa yakhe yokuloba. Nezitulo emangalisayo ukhululekile, ngokulinganisela elithambile, ehlezi lapho akunakwenzeka ukuba usukhathele. Lena enye inzuzo edumile "ezinhlanu wokuhamba".
Abaningi bacabanga kanjalo, bese unquma ukuthuthukisa "Mercedes" yakho. Silungisa - lapha ukuze lokho uhlobo lomsebenzi kwesinye isikhathi kuqakathekile aphathe. Nokho, kulesi simo-ke akudingekile. W124 E500 - futhi ngaphandle ukuthi imoto ephelele. Kodwa uma ufuna into, bese konke kwakwenziwa.
AMG - Tuning studio, okungukufa okuseduze kakhulu futhi njalo ukukhathazeka umsebenzi "Mercedes". kule yunithi Ochwepheshe ngemva kweminyaka embalwa ngemva kokukhululwa kwe "wokuhamba emihlanu", wasephakamisa Tuning. Kwathi nje emihle. Wonke umuntu uyazi ukuthi enhle kunazo AMG umzimba kits. Kodwa bazama hhayi kuphela ekubukekeni. Ergonomics, design elingaphakathi, amandla, isivinini, yokukhanya - konke ithuthukisiwe, olwesimanje. Ngemva Tuning enjalo E500 iye abafiseleka nakakhulu futhi funa.
Abantu abaningi banesithakazelo umsuka igama E500 "Mercedes". Kungani "Phezulu"? Impendulo ngqo kule mibuzo ingucha. Nokho, iningi lithi waqhubeka ethi "impisi izingubo semvu." Ifuna lena enhle futhi ziyabukeka umshini izikhumba ngaphansi hood yayenza ngokungacabangi injini enamandla ukuthi ukhiqiza amalitha 320. s., futhi imizuzwana embalwa kusuka zero emakhulwini, ngiphakamisa ngokushesha lungene 250 km / h.
Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi kukhona kokubili E500 futhi 500E. Abantu abaningi abazi nokwazi ukuthi kukhona okunye ukukhetha, "Volchok". Ngokushesha kukhona kucatshangwa: injini qinile anda ukubukeka olwesimanje kakhulu. Kodwa akukho, yonke into ilula. 500E lihlukile E500 eyodwa encane, ehilelekile abangelutho. Okungukuthi - baphendukela kuwuphawu orange. Yikho lokho, ukuthi umehluko kuphela.
Futhi namanje "wokuhamba emihlanu" sekudlule kahle zonke oshayelayo test. Kwakunzima ukubeka ukulinganisela ngezansi emihlanu, ngoba Ngalezo zinsuku kwaphuma sedan kancane serial kungaba ozibongayo izici ezinjalo. Ukusingatha, induduzo, ukuphepha, ukwethembeka, isivinini - lokhu "gangster Mercedes 'ezicini zonke wathola amaphuzu aphezulu kunawowonke. Lokhu akusona isimanga. Phela, ochwepheshe abaziwa umhlaba wonke wenkampani German sewenze yonke imizamo ukwakha imoto ukuthandwa okuyinto engazange yenzeke.
Ukuqhuma kwe-volcanic: izimbangela nemiphumela